Morocco Archives - Ihe Ndị Ruuru Mmadụ & Ihe Osise site na PixelHELPER Foundation
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski Ihe na n'ozuzu Permalink
Livestream na-enyere aka na mmepe software
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 4. January 2016
Enyemaka enyemaka Livestream. Software maka ịhazi omume na ihe omume ọha
Na nwụnye nke pikselụ Inyeaka Live Stream nuputa Help Software na a na saịtị na North Africa, anyị kere eziokwu a ubi ule nke anyị oru ngo. Anyị nwere ike ịrụ ọrụ ugbu a na nsogbu nke Afrika Afrika na ngwa enyemaka anyị. Anyị eguzobela ọrụ arụmọrụ dị iche iche na saịtị mmepụta mmekọrịta anyị. A akwa akwa, a ịgbado ọkụ ojii, a na-eme bred, algae cultivation, banyere 3 km network USB jikọọ na-egosi ọhụrụ foto nke ndụ mmepụta 20 ese foto na onye ọ bụla ọzọ n'ihi na anyị na ndị na-ekiri mgbe niile.
15 mita igwefoto igwefoto di n'azụ na 360Grad igwefoto isi & Wlan
Nleta ugbo bu ihe siri ike, ugwo ulo oru ma obu na ere
Ngwongwo 23.06.18 bu nri abia na Morocco
Anyị na-ebu nri ọka wit na-aga n'ihu anyị maka 600 agụụ na-agụ ndị mmadụ na Morocco. Ụlọ kichin dị na omenala maka izu abụọ ma anyị ka ga-ebute, ọnụahịa ahụ gbasara 400 €. Ụgbọ ala mmanụ ala na ngwaọrụ maka Spirulina Farm bụ Marrakech ugbu a. Ugbu a, anyị na-achọ ugbo iji wuo Ugbo Spirulina. N'ihi obere onyinye nke 2500 € onyinye n'afọ 2017, anyị nwere ike iji nwayọọ nwayọọ na-aga n'ihu na oru. Anyị na-atụ anya ka ịgbazinye ma ọ dịkarịa ala 600-1200 € dabere na ọnọdụ nke ugbo ahụ. Ebe ọ bụ na ngwa ngwa 4G dị anyị mkpa na ugbo, anyị ga-eme nyocha ọsọ ọsọ na saịtị ọ bụla, ebe anyị ga-emesị na-agba ọsọ ma ọ dịkarịa ala 20 n'ime foto eserese IP, yana izipu osimiri abụọ dị n'èzí gaa Facebook na Twitch.
Nnukwu azụghachi bụ na e nwere ntakịrị ugbo ndị a na-akụghị n'elu osisi oliv, ma nwee oghere oghere na eletrik & mmiri.
Anyị elelela ugbo 10 ugbua na onye naanị ya kwesịrị ire ere maka 80.000 € a na-enye ma ọ bụghị maka ịgbazite.
Ụdị 18.06.18 ka na-ejikwa kichin, tankị dị mfe iji mbupụ
Onu ogugu ugbu a & nhazi
Ugbu a, anyị etinyeworị ihe gbasara 25.000 € na ngwaọrụ maka Spirulina Farm na 25.000 € na nkwụnye ọnụahịa, ịzụta ụgbọ ala na iwetara ngwá ọrụ anyị n'Ebe Ugwu Africa.
Anyị chọrọ enyemaka gị ozugbo o kwere omume izipu 24 hour livestream si Morocco. Ozugbo Ugbo Spirulina na-arụ ọrụ, anyị ga-ebugharị ebe anyị na-esi nri nke onye na-elekọta Defender na Senegal. Ọ bụrụ na anyị agaghị enwe ohere ụlọ obibi maka Morocco, anyị ga-ebuga n'ebe ndịda gaa Mauritania, Senegal na Gambia ma gbalịa ebe ahụ
iji nweta ebe na Daueraufenthalsememigung. O doro anya na ọ dị mfe ibufe tankị na Afrika karịa enyemaka enyemaka ndị mmadụ.
Igwe injinia maka ikuku nke ngwa ngwa nke akwukwo edere n'ime ebe anyi bi
Igwe vidiyo 360 na mkpanaka igwe. Njikọ Wi-Fi na ụgbọ ala maka na-eji ejiji n'èzí
11.05.18 Defender & Caravan na-akwụ ụgwọ dị ka ala dị ka o kwere mee n'Africa
Nlereanya nke mmepụta ihe site na Spirulina ka ha wee ghara ịkụnye efere ihe
Madu ka kenkwukorita ahụmahụ nkwanye LIVE, awụgharị nkesa n'elu emoticons na Facebook. Zombies amaghị agbụrụ, agba ma ọ bụ okpukpe ọ bụla. Ọrụ ahụ Zombies na-enweghị Ebe ọhụụ na-ahụ onwe ya dị ka ihe jikọrọ aka na nhazi. The aha bụ nweta nke a plurality nke zombie kọmputa mba ọzọ na-achịkwa. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ihe ọ bụla na-erughị a ngwọta niile akwalite ọdịmma ndị mmadụ ọdachi site mmekọrịta enyemaka nke ndị na-ekiri na ndụ iyi. Ihe mgbaru ọsọ anyị: 24 hour ndụ iyi nke combustion Punken ụwa. Esonyere akuko agha zones, kwesiri enyemaka nkesa na oso n'ogige ma ọ bụ ichu nta n'ihi na chụọ na Kruger National Park, nke ahụ, ohere anyị igweanu akara na-akparaghị ókè Anyị ngwá ọrụ: The mmetụta uche akara ngosi nke Facebook ịchịkwa inyeaka igweanu na-ekpebi ihe a na-eme.
Ihe mgbaru ọsọ nke zombies enweghị ala, ọ bụ ya mere na ọtụtụ ebe gafee mepụtara technology, gụnyere mobile batrị Tragekraxen; maka RTMP Facebook ndụ iyi ịchịkwa esịtidem wireless igwefoto njikwa, mmekọrịta database software maka igweanu akara, tinye-ons nnukwu iche iche nke ndị na mma nzube site na ihe nchọgharị iji dozie nsogbu ndị bụ isi nke oge ahụ.
Ebe mbụ dị ndụ bụ Senegal, Palestine na ụlọ ọrụ anyị dị na Morocco. PixelHELPER chọrọ inye mba ndị ọzọ onyinye enyemaka ndị mmadụ site na saịtị Morocco. Ka anyị na-aga Madagascar, anyị chọrọ ịwụnye ma ọ dịkarịa ala otu ebe na-eme njem na mba ọ bụla. Ebe obibi Livestream ga-ewulite ọrụ dị ka ebe algae na-emepụta ngwaahịa na imepụta ngwaahịa na ndị gbara ọsọ ndụ iji nye ha ọdịnihu dị mma na Afrika. Ihe niile dị ndụ, ị nọ mgbe niile ma kpebie ihe ga-eme. A ga-egosiputa ebe obula n'ime ubochi nke ubochi, imekorita onyonyo na ebumnuche iji meziwanye uwa site na enyemaka aka. Na Madagascar, anyị chọrọ iji ọgwụgwọ Georgian na-echebe ndị mmadụ site na ọrịa mgbagwoju anya nke na-apụ apụ kwa afọ. Site na òtù nzuzo nke ndị nwụrụ anwụ, ndị bi n'àgwàetiti ahụ na-abata ngwa ngwa na ndị ọrịa ndị gburu ọtụtụ nde mmadụ nọ na Europe na Emepechabeghị Anya.
Ntanetị oge na-enye aka na vidiyo vidio na ihe nchọgharị gị.
Nyochawa ya, ọ na-arụ ọrụ ka anyị na-amalite a ndụ iyi na uzo njikwa na mgbe ahụ na-agba nwoke "Zombies enweghị ala" ọrụ anyị ndụ iyi. Anyị na-doputa choreography mmekọrịta njikwa na-ele na-eme ngwa na mgbanwe na ndụ iyi na n'ókè nke nsogbu.
2014-2015 anyi natara ihe omumu mbu na enyemaka di ndu
Ihe osise & Logo: https://web.facebook.com/SNOB.desillustration
Livestream na-enyere aka na mmepe software February 3rd, 2019Oliver Bienkowski